Sida loo kiciyo dhismayaasha 3D gudaha Google Earth
Inbadan oo naga mid ah waxay yaqaanaan aaladda Google Earth, waana sababta sanadihii la soo dhaafay aan u soo joognay koritaankeeda xiisaha leh, si ay noo siiso xalal sii kordhaya oo wax ku ool ah oo la jaan qaadaya horumarka tikniyoolajiyadda. Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu helo meelaha, helitaanka dhibcaha, soo saarida iskudhafyada, gelinta xogta goobaha si loo sameeyo nooc ka mid ah ...
Ka eeg isku-duwaha UTM ee Khariidadaha Google iyo Muuqaalka Waddada
Tallaabada 1. Soo dejiso tusaalaha quudinta xogta. In kasta oo maqaalku diiradda saarayo iskuduwaha UTM, codsigu wuxuu leeyahay arrimo ku yaal latitude iyo Longitude oo leh darajooyin jajab tobanle, iyo sidoo kale darajooyin, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo. Tallaabada 2. Soo rar shaxanka. Markaad xulaneyso tusmada xogta, ...
Google Earth KML Xafiiska dilaaga ah
Qaado heerarka sare ee wadada Google Earth
Markaan marinayno dariiqa Google Earth, waxaa suurtagal ah in kor loo qaado muuqaalkeeda arjiga. Laakiin markii aan soo dejineyno feylka, waxay keeneysaa oo keliya iskudhafkeeda loolka iyo Longitude. Sarajooggu had iyo jeer waa eber. Qodobkaan waxaan ku arki doonaa sida loogu daro feylkaan sare u kaca laga helay qaabka dhijitaalka ah (srtm) ee Google Earth adeegsado. Sawir Wadada ...
Sida loo soo dejiyo sawirrada Google Earth - Khariidadaha Google - Bing - ArkGIS Imagery iyo ilo kale
Qaar badan oo falanqeeyayaasha ah, oo doonaya inay dhisaan khariidado halkaas oo tixraac raaxo leh oo ka socda barxad kasta sida Google, Bing ama ArcGIS Imagery lagu soo bandhigo, waxaan hubnaa inaanan wax dhibaato ah qabin maaddaama ku dhowaad barxad kasta ay marin u leedahay adeegyadan. Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan soo dejino sawirradaas xallinta wanaagsan, markaa xalalkee ayaa jecel ...
Featured, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Khariidado u samee oo qorshee jidka u isticmaal BBBike
BBBike waa codsi ujeeddadiisa ugu weyni tahay inay bixiso qorshe-hawleed lagu safro, baaskiil, lagu dhex maro magaalo iyo hareeraheeda. Sideen u abuurnaa qorsheeyeheena socdaalka? Xaqiiqdii, haddii aan galno websaydhkaaga, waxa ugu horreeya ee soo muuqda waa liis ay ku qoran yihiin magacyada magaalooyin kala duwan, oo ka mid ah ...
Khibradeyda aan isticmaalayo Google Earth ee Cadastre
Waxaan badanaa ku arkaa isla su'aalaha isla ereyada muhiimka ah ee adeegsadayaashu ugu yimaadaan Geofumadas mashiinka raadinta Google. Miyaan sameyn karaa cadastre anigoo isticmaalaya Google Earth? Sidee sax u yihiin sawirada Google Earth? Muxuu sahankaygu uga jaban yahay Google Earth? Kahor intaysan ciqaabin waxa ...
Arag iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTM
Waxaan ku hayaa xogta Google Earth, waxaanan rabaa inaan ku sawiro iskuduwaha 'Excel'. Sidaad aragtay waa dhul leh 7 geeso iyo guri leh afar geedo. Keydso xogta Google Earth. Si aad u soo degsato xogtaan, midig guji "Meelahayga", oo xulo "Badbaadi meesha sida ..." Maxaa yeelay waa fayl ...
rasiidh Google Earth KML
files SHP Open la Google Earth
Nooca Google Earth Pro wuxuu joojiyay in lasiiyo waqti hore, taas oo ay suurtogal tahay in si toos ah looga furo faylasha GIS iyo Raster kaladuwan. Waxaan fahansanahay inay jiraan siyaabo kala duwan oo loogu diro faylka SHP Google Earth, ama ha laga soo qaato barnaamijyada macaamiisha sida BentleyMap ama AutoCAD Civil3D, ama ilo furan ...
Maareeyaha da'ayeen: Maamul xogta aan ollogga hufan, iyo tan iyo AutoCAD
Maareeyaha Spatal waa codsi loogu talagalay maareynta xogta xadka, kaas oo u shaqeeya si madaxbanaan. Waxa kale oo ay leedahay shebekad awood siisa awooda korantada AutoCAD.
AutoCAD 2015 Map-ka AutoCAD Dgn Dwg KML My aragti ugu horeysay QGIS SHP
Isku siinta Microstation Google Earth
Google Earth wuxuu noqday aalad aan laga maarmi karin howlahayaga khariidadeynta hadda. In kasta oo ay leedahay xaddidaadkeeda iyo natiijada fudeydkeeda, qalloocyo badan ayaa maalin kasta laga faalloodaa, aaladdaan waxaan ku leenahay in juqraafiga iyo marin haynta khariidadaha ay caan ku yihiin maanta ... sidaas darteed waxaan ...
OkMap, ugu fiican abuurista iyo hagaajinta khariidadaha GPS. BILAASH AH
OkMap waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu adag dhismaha, tafatirka iyo maaraynta qariiradaha GPS. Iyo astaamaha ugu muhiimsan: Waa Bilaash. Dhamaanteen waxaan aragnay baahida loo qabo in la habeeyo khariidad, jaangooyooyin muuqaal ah, loo soo rogo feyl qaab ah ama kml GPS Garmin ah. Hawlaha kuwan oo kale ah ...
Google Earth / Maps, GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay
SuperGIS Desktop, isbarbardhigyo qaar ...
SuperGIS waxay ka mid tahay nooca Supergeo ee aan maalmo ka hor ka hadlay, iyadoo guul wanaagsan laga gaadhay qaaradda Aasiya. Imtixaan ka dib, waa kuwan qaar ka mid ah dareenka aan qaatay. Guud ahaan, waxay ku saabsan tahay oo keliya waxa barnaamij kasta oo tartan ahi sameeyo. Kaliya waxaa lagu maamuli karaa Windows, laga yaabee in lagu horumariyo C ++, loogu talagalay ...
ESRI GvSIG OS KML GIS kala cayncayn ah SHP
Aqoonsi, saxsanaanta qiimaha dijitalka ah ee GPS
Badeecadan ayaa dhowaan lagu soo bandhigay Shirka Isticmaalayaasha ee ESRI ee Isbaanishka, kaliya usbuucii hore iyo tan xigta waxay ku jiri doonaan TopCart ee Madrid. Waa nidaam meeleyn iyo cabbiraad GPS ah oo taageera dib-u-shaqeynta, kaas oo lagu heli karo saxnaanta santimitirka. Wax aan dadka kale sameynin ...
Trans 450, Baska Basaska Degdega ah ee loogu talagalay Tegucigalpa
Kani waa mashruuc xiise badan oo hadda lagu horumarinayo Honduras, oo hoos imanaya habka loo yaqaan 'Rapid Transit Bus (BTR)'. In kasta oo hadda ay taagan tahay heerkaas fahamka ah ka hor gaadiidleyda aan caddayn sida ay magaalooyinku u kala beddelaan, haddana waxay noo muuqataa mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee laga soo saaray horumarinta dhidibka mawduucyada ...
tabo cusub, Maamulka Land
Liiska dhoofinta ee iskuduwaha juqraafi ee Google Earth, laga bilaabo Excel, oo leh sawir iyo qoraal hodan ah
Tani waa tusaale sida Excel ugu diri karto waxyaabaha Google Earth. Arrintu waa tan: Waxaan haynaa liis isku-duwaya oo qaab jajab tobanle ah (lat / lon). Waxaan dooneynaa inaan u dirno Google Earth, waxaanan dooneynaa inay muujiso koodhka barta xiisaha, qoraal geesinimo leh, qoraal sharaxaad leh, sawir ah ...
Luuqeeyo in Google Earth, ka wadataa UTM
Aynu aragno kiiska: Waxaan aadey berrinka si aan u dhiso guri, sida ku cad jadwalka soo socda waxaanan rabaa inaan ka daawado Google Earth, oo ay ku jiraan dhowr sawir oo aan soo qaaday Garaadka shaxanka ayaa ah inay qaadanayso hal tallaal oo keliya: Beddel Juquraafi ahaan UTMa wuxuu isku duwayaa qaab jajab tobanle, maadaama ay tahay ...
Sida loo geliyo sawirrada maxalliga ah Google Earth
Kajawaabida su'aalaha qaar ee iiyimaada, waxaan ka faa'iideystaa fursad aan uga tago natiijada si loogu isticmaalo dadweynaha. Waqti ka hor waxaan ka hadlay sida aad u dhex galin karto sawirro ku xiran barta Google Earth, in kasta oo la isticmaalayo cinwaanada shabakadda. Xaaladdan oo kale waxaan doonayaa inaan ku muujiyo iyadoo la adeegsanayo waddo maxalli ah: Iyadoo loo maleynayo in feylku ku jiro booska C: / Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, markaa ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 6 page Next
Dib u soocelinta Koorsada MEP - Rakibaadda Tuubbooyinka
Abuuritaanka moodooyinka BIM ee rakibaadda dhuumaha Waxa aad baran doontid Si wada jir ah uga shaqee mashruucyada edbinta badan ee ku lug leh ...
Koorsada Google Earth: laga soo bilaabo aasaasiga illaa heerka
Google Earth waa barnaamij softiweer ah oo u yimid inuu isbeddel ku sameeyo sida aan adduunka u aragno. Khibrada ku xeeran ...
Golayaasha, dusha sare, qaybaha iskutallaabta, kuuskuus. Baro abuuritaanka naqshadaha iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee tooska ah ee barnaamijka 'Autocad Civil3D' ee lagu dabaqay ...